Inona no tokony ho fantatrao eo anatrehanao hividy ny tetika tany amin'ny trano bongony
Inona no tokony ho fantatrao eo anatrehanao hividy ny tetika tany amin’ny trano bongony
Ny fanorenana ny firenena iray trano mifandray foana ny tany purchase. Fa, matetika, amin’ny fividianana ny tany ao amin’ny trano bongony no manana olana. Saika ireo rehetra izay mikasa hividy tetika ny tany, na ho an’ireo izay efa hita ny olana rehefa mividy, izy ireo kosa ny mpisolovava.
Raha azo atao, buy afa-tsy ireo izay manondro ny tany momba ny tanàna, ny tanàna trano bongony. Ho an’ny fividianana dia tokony havela ho an’ny olona ny fanorenana, miaraka amin’ny fonosana feno ny antontan-taratasy ilaina. Toy izany tany an-tsena fotoana fohy — sy buy ny olana, na dia tsy azo atao satria ny lehibe sarobidy. Ny ampahany lehibe indrindra amin’ny fiaraha-monina trano bongony dia any amin’ny tany fambolena, noho izany, ilay safidy bebe kokoa ny zava-misy.
Fa na dia eto misy olana
Ny zava-misy fa ny Lalàna Federaly ao amin’ny fikambanana ny horticultural, na dia azo atao mba hanorina trano ao amin’ny faritra ny saha, miaraka amin’ny toerana misy ny tany fambolena, fa ireo trano fonenana dia hita ao an-tsaina ny trano ho an’ny vanim-potoana ny toeram-ponenana, sy ny tsy-drenivohitra.
Navela hijanona ao ny zavatra ilaina dia voarara
Ny fampiharana ny trano eo amin’ny tany fambolena dia maneho fa izy no nanorina ny renivohitra trano bongony, natao ho fonenana maharitra. Nefa, mba hahazoana izany sata noho ny toerana vaovao no nitranga dia tsy iray kilasy, anisan’izany ny fitsarana. Noho izany dia mitaky ny fananana fahaiza-manao ao an-tongotra be dia be ny vola. Ankoatra izany, toy izany ny tany, ny manampahefana ao an-toerana dia tsy maika mba hampivoatra ny foto-drafitr’asa. Ary raha ny antontan-taratasy momba ny tany, voaravaka amin’ny ratsy ny lalana, ny trano bongony vaovao dia afaka hamantatra ny fanorenana tsy nomena fahefana. Eo anatrehanao hividy ny tetika tany amin’ny trano bongony tokony ho fantatra raha toa ka nankatoavina, ny mpanao mari-trano, ny distrika ny drafitra ankapobeny. Ao amin’ny cadastral pasipaoro ho an’ny tany purchase no nanome ny fahazoan-dalana ho amin’ny asa fanorenana sy ny voalaza, izay ny tanjona. Mba hanamarinana ny azo antoka baovao, ny fifandraisana amin’ny fahefana eo an-toerana sy hahatakatra nandray ny fanapahan-kevitra hanova ny fampiasana ny tany fambolena ho an’ny fanorenana ny trano, Ny developer miandraikitra ny tetikasa fanorenana any amin’ny trano bongony, dia tsy maintsy manome ny nividy ara-dalàna ny antontan-taratasy momba ny tany. Ny tany azo nanofa maharitra, fa amin’ity tranga ity, voatery voarakitra ao Rosreestra Eo amin ny tany novidina dia tsy maintsy ho namoaka pasipaoro fisoratana anarana, izay dia voalaza ny habeny sy ny fanapahan-kevitra ho ampiasaina. Eny an-kianja ny faritry ny toerana, jereo ny baoritra, na famantarana. Ho azo antoka izay hijery tsara ny dingana drafitra ao amin’ny cadastral pasipaoro miaraka amin’ny tena tetika ny tany Alohan’ny mividy tany tao amin’ny trano bongony tokony ho fantatrao bebe kokoa ny fanazavana momba ny mpanorina ny orinasa-builder (ny alalan ny irs, na dresaka ao amin’ny aterineto). Eo amin’ny Fitantanana ny rejisitry ny rosiana dia azo atao ny mahafantatra ny vaovao momba ny zo sy ny famerana ho an’ny tany. Ao ny tantara ny developer tokony hihaino tsara dia hita avy mahomby ny zavatra niainany ny fampiharana ny tanàna. Ny fisian’ny manontolo, ary ny marina momba ny tranonkala, hoy ny fanokafana sy ny maha zava-dehibe ny orinasa amin’ny asa. Raha toa ka ny toerana ny orinasa unpresentable, noho izany, ny orinasa vao nanomboka niasa tany an-tsaha ity, na dia tsy natoky eo amin’ny raharaham-barotra, Ianao no tokony hihaino tsara ny sehatry ny toeram-ponenana. Na dia tsy vita, na vonona ampiasaina ao an-trano, amin’ny fifandraisana: ny rano, rano maloto, herinaratra, mandatsa-dranomaso, vidin-tany dia miankina amin’ny ny lavitra avy ny tanàna. Ny maha samy hafa ny kilometatra vitsivitsy dia afaka ny ho zava-dehibe eo ny vidiny. Ankoatry ny anton-javatra io, ny vidiny dia ny hampihena ny fisian’ny fifandraisana ao an-tanàna, ny isan’ny singa ny foto-drafitrasa. Misy fiantraikany lehibe eo ny lanjan ny tany ny fisian’ny làlana amin’ny tanàna sy ny hamlet sy ny kalitao. Mazava ho azy, fa ny trano vaovao ao amin’ny — tsaha, dia handeha ho lafo be tsy efa ny fandaozana ny tany. Ny vola lany amin’ny ny sombin-tany dia afaka miovaova arakaraka ny vanim-potoana. Ny fotoana tsara indrindra ny taona amin’ity tranga ity dia ho amin’ny ririnina, raha ny teti-dratsin’ny kely loatra, fa ny fandinihana no nisakana. Ny fahafantarana ny fandrika izay mitranga rehefa ny fividianana ny tany tao amin’ny trano bongony, ny mpividy dia ho mora kokoa ny hanao ny safidy tsara. Fa tsarovy fa ny hevi-dehibe ao anatin’ity asa fitoriana ny marina fanoratana ireo antontan-taratasy. Manao izany dia manampy mpahay lalàna za-draharaha, indrindra indrindra, mba hampiala azy amin’ny fotoana mialoha ny safidy sy ny fividianana ny tany